Remedie dimy hanampy anao hampitombo haingana ny volonao - AFRIKHEPRI
Aretina dimy hanampy anao hampitombo haingana ny volonao
Manjary mpanohana anay sy mpiara-miasa aminay
ny sabotsy, 28 may 2020
Fifandraisana FITAFIANA sy FANAFODY
Fanampiana amin'ny fitomboan'ny volo
Vindreto misy fanafody dimy ao an-trano hanampy anao hampitombo haingana ny volonao
1- Onion sy sira citrouilles
Manana solifara izay manatsara ny famokarana tavy kônga ny sipa jono. Manampy izany ny vatana hanoto l' volo.
Fomba fiasa 1here:
Manolotena tongolo roa na efatra mba hanosihosy ny sira.
Atsofohy amin'ny sira ny tongotrao ny hodianao.
Alefaso mandritra ny adiny iray na farafahakeliny 15 minitra.
Dia sasao ny anao volo amin'ny rano sy ny shampoo.
Fomba fiasa 2e:
Afokao efatra sy dimy tongolo.
Atsofohy ao anaty rano iray litatra mandritra ny dimy ka hatramin'ny folo minitra.
Aorian'izany dia avelao ny rano.
Aorian'ny shampoo, ampiasao ity rano ity hanasana anao volo.
Aza manasitrana ny volonao amin'ny rano hafa amin'io andro io. Ny ampitson'io, afaka mampiasa rano madio amin'ny shampoo ianao.
Raha tsy afaka mitsangana ny fofona ianao, miandry iray minitra farafahakeliny alohan'ny handosana rano madio. Avy eo dia ataovy ny shampoo, ary sasao ny volonao amin'ny rano madio.
Fantaro fa ankoatra ny fandraisana anjara amin'ny fitomboan'ny anao volo, mamelona azy ireo ilay tongolo.
2 - Potato Juice
Ankoatra ny fanaovana hanoto votre volo, afaka manasitrana alikaia ny ranom-boankazo. Vary manan-karena amin'ny vitamina A, B sy C. ny ovy volo Mitepo sy maina rehefa tsy mihinana ireo vitamina ireo ny vatanao.
Ampiharo mivantana amin'ny sira volo dia mahasoa. Mba hanaovana izany, ento am-paty telo na efatra, ary asio izy ireo, dia afanio ny sira. Manaova fanasitranana miaraka amin'ny ranom-boankazo mandritra ny dimy ambiny folo minitra. Misotro rano. Azonao ampiasaina ny masirasira toy ny volom-bolo raha ny anao volo tena maina.
Ireto misy fanafody ovy misy alikaola
Mankasitraka ny ovy.
Atsipazo ny sira.
Ampiasao ny tantely sy ny atody ho an'ity sokatra ity, ary aforeto.
Ampiharo eo amin'ny hoditrao io fitambaran-kafe io.
Mandritra ny antsasak'adiny farafahakeliny.
Avy eo dia misasa amin'ny rano sy ny shampoo.
Ny tantely sy ny atody dia manampy betsaka ny hafanana amin'ny ranom-boasary, izay mahasoa volo maina. Ity masom-bolo voajanahary ity dia hanampy anao hitombo volo haingana.
Les volo dia natao avy amin'ny proteinina indrindra. Ny fomba tsara indrindra atao hanoto votre volo dia ny hanome azy ireo ny iray amin'ireo proteinina tsara indrindra, akondro fotsy. Hanome fanafody fanampiny ho anao izy ireo volo, izay hanampy azy ireo hitombo. Mba hanaovana izany, aforeto ny atody iray na roa, dia afindranao ny hoditrao miaraka amin'io fitambarana io. Alefaso mandritra ny adiny iray izany. Alohan'ny hidiranao volo dite kapoaka. Dia sasao ny anao volo miaraka amin'ny rano sy ny shampoo.
Azonao atao koa ny hanome hery bebe kokoa sy hamirapiratra ho anao volo mampiasa masom-bozaka.
Zazakely iray na roa
Afangaro ny zavatra rehetra.
Ampiharo tsara ny masonao eo amin'ny hoditrao.
Araraoty ny anao volo dite kapoaka.
Mialà eo amin'ny 15 amin'ny minitra 20.
Sasao amin'ny rano sy ny shampoo maivana.
4 - Sasao amin'ny vinaingitra ny volo
Manosotra ny volo-volo ny akoho vita amin'ny vilany, izay manampy azy ireo hivoatra haingana kokoa. Ankoatra ny fihazonana ny balan'ny PH volo, manampy amin'ny fanadiovana ny hodi-doha koa izy io, izay manatsara ny fitomboana volo. Ampiasao amin'ny vinaingitra vita amin'ny pòm koa ny vinaingitra farany ho anao volo. Isaky ny manasa ny anao volo Amin'ny shampoo, manasà azy miaraka amina vinaingitra sy rano vita amin'ny pòm. Mba hanamboarana ny fofona amin'ny vinaingitra vita amin'ny vilany ary noho izany ny anao voloAfaka manampy menaka solika maromaro ianao, toy ny menaka lava, ao anatinao.
Ny Fenugreek dia nampiasaina mba handaminana ny fahalavoan'ny volo nandritra ny an'arivony taona, tany amin'ny faritra maro maneran-tany. Azo ampiasaina amin'ny fitomboan'ny savoka izany volo.
Zana-tsakafo roa na roan-jato telo eo ho eo
Dip fenugreek ambioka ao anaty rano mandritra ny ora 24.
Ampiasao amin'ny rano avy eo ny rano volo.
Avelao ny rano hanala anao volo ho an'ny telo ora farafahakeliny.
Dia sasao ny anao volo amin'ny rano mafana. Zava-dehibe ny tsy hampiasa rano mangatsiaka mba hosasana sy hanasarahana volo.
Avereno izany isan'andro isan'andro isaky ny volana. Ny volonao dia hahazo herim-batana sy hery.
Afaka ampiasaina koa ny Fenugreek mba hanamboatra volom-borona hahatonga azy ireo hanoto haingana kokoa.
A teaspoon of seeds of frogs
¼ kaopy ronono voanio (na mihoatra, raha lava volo ianao)
Afangaro ny voaniho voanio ary ny voaniho mena mandrapahazoanao akangom-pitoto izay tsara.
Apetaho eo amin'ny volonao sy eo amin'ny hoditrao izany.
Mialà mandritra ny antsasak'adiny.
Amin'ny maha-bonus azy, misy sombiny tsara ho an'ny fitomboan'ny volo:
Ankoatra ireo fitsaboana voatonona etsy ambony, dia tokony hanasitrana ny anao volo miaraka amin'ny menaka mahasalama, fara fahakeliny indray mandeha isan-kerinandro. Mba hanaovana izany, tandremo kely misy menaka voanio, menaka oliva na menaka mandalo, avy eo manosotra moramora ny hodi-doha amin'ny fihetsiketsehana boribory amin'ny iray amin'ireto menaka ireto.
Ho an'ny vokatra tsara indrindra, avelao ny solika hiditra ny anao volo mandritra ny alina. Raha tsy azo atao izany dia atsofohy amin'ny rano mafana ny lamba famaohana, atsangano ny rano fanampiny, ary ampidiro ny lamba famaohana manodidina anao. volo menaka. Mialà mandritra ny fotoana fohy, ary sasao amin'ny shampoo sy ny vatana mangatsiatsiaka.
Ny lamba famaohana dia hamela ny solika hiditra lalina ao amin'ny volon'ireo volon'ondry, izay hahatonga anao volo salama, matanjaka ary matanjaka.
Anti-kapoanana ny volo, ny shampoo anti-volo, volon-doha very, volo mitombo volo, fitsaboana ny volo amin'ny lehilahy sy vehivavy, mampiroborobo ny fitomboan'ny volo - 220ml
16,99€ ao amin'ny staoky
2 vaovao manomboka amin'ny 16,99 €
tamin'ny 28 Mey 2020 6:10
Ny fiasa: Ny shampoo dia manampy amin'ny fifehezana ny fatiantoka volo amin'ny lehilahy sy ny vehivavy shampoo ho an'ny fitomboan'ny volo ho an'ny mpanamboatra volo. Mampiroborobo ny fitomboan'ny volo, fisorohana ny fihenan'ny volo ary hanatsara ny tanjaky ny follicle.
Manamafy ny follicle ny volo: mampihetsika ny volon-doha ary mandrisika fitomboana ara-pahasalamana. Fomba voajanahary hiadiana amin'ny fahaverezan'ny volo amin'ny lehilahy na vehivavy, raha manentana ny fitomboana ara-pahasalamana.
Mampiditra lalina ao anaty fakan'ny volo izy ary miantoka ny fitomboan'ny volo matevina ary malefaka kokoa.
Manampy amin'ny fampiroboroboana ny fananganana follicle salama mahasalama, mampihena ny fihenan-bolo, manamafy ny fibra manohitra ny fahatapahana ary manenjana ny volo misy efa misy volo matevina sy matevina.
Ity shampoo volo ity dia vita amin'ny zavamaniry zavamaniry voajanahary rehetra, sahaza ho an'ny karazana volo rehetra, tsy handratra mihitsy ny volo.
Ny hoditra maina: ahoana no fomba hahitana fototra fototra?
Ny Baya na ny famokarana Afrikana
Na ny masoandro aza dia ho faty indray andro any - Eckhart Tolle (Audio)
Ilay siansa mihasimba na ny teoria misy ny fanakambanana
Eo ambanin'ny afo, ny fahafatesana ho toy ny hypotesisma miasa
"Ry Afrikanina, andao hifoha!": Kabary nataon'i Patrice Lumumba, 22 martsa 1959